साबधान ! के तपाईको पिसिआर रिपोर्ट सक्कली छ? नक्कली पिसिआर रिपोर्ट तयार पारेर दुई घण्टामै घर–होटलमा पु-याउने यस्तो गिरोहको खुलासा – Khabaarpati
April 21, 2021 goodmamLeaveaComment on साबधान ! के तपाईको पिसिआर रिपोर्ट सक्कली छ? नक्कली पिसिआर रिपोर्ट तयार पारेर दुई घण्टामै घर–होटलमा पु-याउने यस्तो गिरोहको खुलासा
“कोरोना परीक्षणको पिसिआर रिपोर्ट घण्टाघण्टामा बन्न कसरी सम्भव छ, सक्कली हो कि नक्कली हो हेर्नुप¥यो”, यही बाक्य बोल्दै महानगरीय अपराध महाशाखामा एक व्यक्ति आइपुगे । उक्त शङ्कास्पद कुरा सुनेपछि महाशाखाको ध्यानाकर्षित भयो । प्रहरीले तत्कालै विशेष टोली तयार पारेर अनुसन्धानमा खटायो । खटाएको एक हप्ताको अपरेशनमा कैफियत फेला परेपछि मङ्गलबार प्रहरीले काठमाडौँको सिनामङ्गलबाट आठ जनालाई पक्राउ ग¥यो । उक्त नक्कली धन्दामा सुरिया हेल्थकेयर प्राली र मेरिट मल्टिकेयर मेडिकल सेन्टर संलग्न रहेको पाइएको छ ।
“उनीहरुले होटल, घरमा पिसिआर रिपोर्ट डेलिभरि गर्ने गरेका रहेछन्, छिटो बनाउन बार्गेनिङ गर्ने, छिटो बनाइदिन आग्रह पनि गर्ने रहेछन्”, महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले रासससँग भन्नुभयो, “त्यसपछि डेढ÷दुई घण्टामा रिपोर्ट बोकेर घरमै पुग्दा रहेछन् ।”
स्वाब सङ्कलन गरेर रिपोर्ट तयार पार्न सामान्य प्रक्रिया गर्दा पनि केही घण्टा लाग्छ । यती छिट्टै रिपोर्ट बनाएर घरमै पु¥याउने भएपछि शङ्का लागेर अनुसन्धान शुरु गरेको खापुङले बताउनुभयो । एक हप्ताको अनुसन्धानले उनीहरुको गतिविधि पुष्टि भयो । उनीहरु पक्राउ परेका हुन् र मुख्य गरी उनीहरुले हवाई यातायात प्रयोग गर्नेलाई केन्द्रित गर्ने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई यसरी बढी नक्कली रिपोर्ट बनाइएको फेला परेको छ । आज मात्रै प्रहरीले त्यस्ता नक्कली रिपोर्ट बोकेर विदेश जान लाग्ने १७२ यात्रुलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ पनि गरिसकेको छ ।
यसरी पक्राउ परे विदेश जान ठिक्क परेका १७२ यात्रु विशेष सुराकीका आधारमा गएको प्रहरीले नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाउँदै गर्दा काठमाडौँको सिनामङ्गलमा रहेको सुरिया हेल्थकेयर प्रालीका सञ्चालक डा सिपी श्रीकुमार र मेरिट मल्टिकेयर मेडिकल सेन्टर प्रालीका सञ्चालक प्रकाश रायमाझी भन्ने चित्रबहादुर रायमाझीसहितका समूह फेला पारेपछि प्रहरी अझै सक्रिय भएर खोजीमा लागेको थियो । उनीहरुमाथिको अनुसन्धानबाट आएको विवरणका आधारमा आज विमानस्थलमा आपसी समन्वयमा प्रहरीले खोजी अभियान चलाउँदा १७३ जना त्यस्तै नक्कली रिपोर्ट बोक्ने फेला परे । उनीहरु विभिन्न देश जान लागेका यात्रु हुन् ।
प्रहरीले मङ्गलबार सिनामङ्गलमा रहेको सुरिया हेल्थकेयर प्रालीबाट जारी भएका स्वाब सङ्कलन तथा परीक्षण नै नगरी पिसिआर टेष्ट नेगेटिभ भनी उल्लेख भएका चार थान रिपोर्ट फेला पारेको थियो । त्यसपछि नक्कली धन्दा बाहिर आएको हो । यसअघि पनि पटकपटक यस्तो सुनिएको र केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भए पनि यती धेरैमात्रामा गिरोह सक्रिय छन् भन्ने कुरा भने बल्ल मात्रै बाहिर आएको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त समूहले यसअघि पनि धेरैलाई यसैगरी नक्कली काम गरेर पैसा असुलेको प्रहरीको आशङ्का छ ।
नक्कली धन्दामा सहभागी भएका झापा गौरादह घर भई हाल पेप्सीकोला बस्ने वर्ष ४५ का प्रकाश रायमाझी भन्ने चित्रबहादुर रायमाझी, सप्तरीका प्रमोदकुमार यादव, महोत्तरी गौशालाका प्रदीपकुमार गिरी, महोत्तरीकै अमनकुमार यादव, मोरङको विराटनगरका वजेश पोख्रेल, महोत्तरीका बादल मिरिङ थिङ, दोलखा वैतेश्वरी घर भइ चाबहिल बस्ने वर्ष २२ का सरोज क्षेत्री, सप्तरी मध्यपुराका डा खेलानन्दप्रसाद सिंहलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी रखिएको छ । प्रहरीले रिपोर्ट बनाउन प्रयोग हुने कम्प्युटरलगायतका उपकरणसमेत नियन्त्रणमा लिएको छ । थप अनुसन्धान कार्यका लागि राष्ट्रिय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका प्रतिनिधिको रोहबारमा सुरिया हेल्थकेयर प्रालिको सेवा हाललाई बन्द गराइएको छ ।
दु’खद खबर : रात्रीबस र ट्र’क ठो’क्किँदा ३ जनाको मृ’त्यु, १० जना घा’इते’